မြန်မာ့မဏ္ဍိုင် ကုမ္ပဏီ၏ OTTO- All Win Branch မှ တင်သွင်းရောင်းချလျက်ရှိသည့် Electric Kitchenware product များ
လူကြီးမင်းအားလုံးကို အမှတ် (၂၄၀) ၊ (A+B) ၊ New Day ဆီဆိုင်ဘေး ၊ အထက်ပုစွန်တောင်လမ်း ၊ မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့နယ် ( Map- https://goo.gl/maps/7ig5pcZ1WaryCEdW7 )တွင်တည်ရှိသော မြန်မာ့မဏ္ဍိုင် ကုမ္ပဏီမှ တင်သွင်းရောင်းချလျက်ရှိသည့် Electric Kitchenware product များနှင့် မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။
မိတ်ဟောင်းမိတ်သစ်များအတွက် ယိုးဒယားနိုင်ငံထုတ် အော်တို အီလက်ထရောနစ် ကုန်ပစ္စည်းများ ကို OTTO Electronics Myanmar – All Win Trading Co., Ltd မှ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးသို့ ဖြန့်ချီလျှက်ရှိ ကြောင်း သတင်းကောင်းပါအပ်ပါသည်။
ထို့အပြင် လက်ကား ဝယ်လိုသည်ပဲဖြစ်ဖြစ်/ လက်လီဝယ်ယူချင်သည်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် Amazing price များဖြင့်လူကြီးမင်းတို့စိတ်ကြိုက်မှာယူနိုင်ပါကြောင်း (https://www.facebook.com/ottoelectronicmyanmar/?epa=SEARCH_BOX) နှင့် OTTO Electronic ရှိ မီးဖိုချောင်းသုံး ပစ္စည်းများသည် ယိုးဒယား စက်ရုံ မှ တိုက်ရိုက်တင်သွင်းသောကြောင့် အရေးအသွေးမှန် ဈေနှုန်းမှန်ကန်ပြီး သုံးစွဲသူ အိမ်ရှင်မ များအား တစ်နေ့တာ အလုပ်ပြီးမြှောက် စေရန် ကူညီပေးနေပါသည်။
OTTO Brand မှ ရရှိနိုင်သော ပစ္စည်းများမှာ
ထုတ်ကုန် ပစ္စည်းများအကြောင်း အသေးစိတ်ပိုမို သိရှိလိုပါက www.otto.co.th/category/4244/new-product Page တွင်လည်း ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါသည်။
ပြီးနောက် အားပေးသူ မိဘပြည်သူများ သိထားသင့် ပစ္စည်း Warranty အကြောင်းလေးပြောပြပေးချင်ပါတယ်။
ဝယ်ယူသည့်နေ့မှစ၍ (၃) လအတွင်း ပစ္စည်းပျက်စီးပါက အသစ် (၁) လုံးလဲ ပေးပါမည်။
(၃) လမှ (၆) လအတွင်း အပိုပစ္စည်းနှင့် ပြုပြင်ခကို (အခမဲ့) ဆောင်ရွက်ပေးပါမည်။
ကျန် (၆) လမှ (၁) နှစ်အတွင်း လက်ခ (အခမဲ့) ဖြင့်ဆောင်ရွက်ပေးပါမည်။
Wow, Wow! တစ်ကယ့်ကို amazing တွေပါပဲနော်။ ဒီထပ်ပိုပြီး Amazing ချင်ရင်တော့ ၀၁-၂၀၂၀၄၂, ၀၉-၄၂၁၁၆၃၉၄၁, ၀၉-၉၇၇၄၀၀၉၄၁ စသည်တို့ကို ဆက်သွယ်နိုင်သည့် အပြင် Facebook messenger www.facebook.com/ottoelectronicmyanmar/ သို့လဲ သိလိုသမျှကို ရုံးချိန်အတွင်း တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်ပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။
OTTO Catalogue Download
OTTO Electric Oven(2500W)(60L)
👉 ကျယ်ဝန်းသော ဧရိယာနှင့် စွမ်းအားမြင့် အပူချိန်(2500W) တို့အပြင် Non-stick ဗန်း (၃)ချပ်၊ Stainless steel စကာ(၁)ချပ်နှင့် အသားကင်တုတ်(Rotisserie) တို့ ပါဝင်သောကြောင့် လွယ်ကူလျင်မြန်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်မှာ ဖြစ်လို့ အချိန်ကုန် လူပင်ပန်း သက်သာစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
👉 ဆီကျ၊ရေကျရန်အတွက်လည်း အောက်ခြေမှာ ဗန်း (၁)ချပ် ထားပေးထားတဲ့အတွက် ညစ်ပတ်ခြင်း၊ အချိန်ကြာလာလျှင် သံချေးကိုက်ခြင်းတို့ကို စိတ်ပူစရာ မလိုတော့ပါဘူး။
👉 အဓိကအားသာချက်ကတော့ အပူပေးကွိုင်(heating element) (၆)ခုနှင့်အတူ ထိန်းချုပ်ခလုတ် (၄)ခုတို့ပါဝင်တဲ့အပြင် အပေါ်အပူပေးကွိုင်(upper heater)နှင့် အောက်အပူပေးကွိုင် (lower heater) တို့ကို အပူချိန် ခွဲခြားသတ်မှတ်ပြီး လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အတွက် အကျက်မညီခြင်းနှင့် အပူချိန်မမျှတခြင်းတွေကို စိတ်ပူစရာ မလိုတော့ပါဘူး။
OTTO Electric Mixer (1200W)
👉စွမ်းအားမြင့်မော်တာ(1200W)ကို အသုံးပြုပေးထားသောကြောင့် flour (1300g)နှင့် ကြက်ဥ(18eggs)အထိ မွှေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။Speed (1 to 5) ပါဝင်သည့်အတွက် လိုအပ်သလို သုံးနိုင်မယ့်အပြင် မွှေရန်အိုးတစ်လုံး ပါသည့်အတွက် လုပ်ငန်းပိုမိုတွင်ကျယ်စေမှာဖြစ်ပါသည်။
💥 Mixing bowl capacity-5 liters
👉 Kneading hook, Eggbeater, Mixing hook, Measuring cup, Extra bowl
OTTO Electric Chopper
အသားနှင့် အသီးအရွက်များ လှီးကြိတ်နိုင်ရန် မော်တာအား (250W)ပါဝင်သည့်အပြင် နှစ်ရှည်ကြာ သံချေးမတက်သော Stainless steel ဓားသွားများကို အသုံးပြုပေးထားပါသည်။
Warranty အနေဖြင့် ဝယ်ယူပြီး ပထမ(၃လ)အတွင်း စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ Errorရှိခဲ့ပါက အသစ်တစ်လုံးနှင့်ပြန်လဲပေးပါမည်။
OTTO Electric Blender(1000W)
‌👉 Heavy-duty များအတွက် အသင့်လျော်ဆုံး powerful motor(1000W) ဖြစ်ပါသည့်အတွက် မာသောအသီးများနှင့် ရေခဲများအထိ ခွဲချေနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။Stainless steel ဓားသွား (၆)ချောင်းပါဝင်သည့်အတွက်Smoothie အထိဖျော်နိုင်မည့်အပြင် Speed adjusting wheel, Pulse နှင့် On/Off ခလုတ်များပါဝင်တဲ့အတွက် လိုအပ်သလိုချိန်ညှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။Cup capacity (2L)နှင့် RPM-25000/min ပါဝင်သောကြောင့် လုပ်ငန်းပိုမိုတွင်ကျယ်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။
💥 Cup capacity-2.0L
💥 Continuous working time-15min
အဆင့်မြင့် Vacuum Cleaner (HV-194A) Power 1400W
စက်(Body)ABS Plastic ဖြင့်ပြုလုပ်ထားခြင်းကြောင့် အပူအရှိမြင့်မားမူဒဏ်ကိုခံနိုင်ခြင်း ဖုန်စုပ်ရာတွင် လေစုစည်းမူဆွဲအားကောင်းသည့်အပြင် မွှေးပွကော်ဇောများအတွက် ဖုန်စုပ်ရင်းတစ်ပြိုင်တည်းအသုံးပြုနိုင်သော Brush ပါရှိသည့် လေစုပ်ခေါင်းအပိုနှစ်ခုပါရှိသောကြောင့် ကုတင်၊ဆိုဖာ ၊စာအုပ်စင်၊ Airconတို့အပြင် ရှင်းလင်းရခက်ခဲသည့် ကြို့ကြားနေရာများကိုပါ အလွယ်တကူသန့်ရှင်းနိုင်သည် စက်အစိတ်အပိုင်းတို့အား သန့်ရှင်းရန် ဖြုတ်တပ်လွယ်ကူခြင်းတို့ကြောင့် အသုံးရအဆင်ပြေသည့် အရည်အသွေးမြင့် ဖုန်စုပ်စက် ဖြစ်သည်။
💥 Removable and washable bag withacapacity of 1.5 liters.
💥 1400 Watt 220 Volt, 50 Hz.
အဆင့်မြင့် Electric Iron EI-(612S)
မီးပူမျက်နာပြင်မှာ Non-Stick ဖြင့်ပြုလုပ်ထားခြင်းကြောင့် အဝတ်စားများကပ်ခြင်း မရှိသည့်အပြင် လျှပ်စစ်မီးအား မြင့်တင်မူရှိခဲ့ပါက အလိုအလျောက်မီအားဖြတ်တောက်ပေးသောစနစ်ပါရှိသည်။ ရေသိုလှောင်ကန်ပါရှိခြင်းကြောင့် သမားရိူးကျမီးပူတိုက်နိုင်သည့်အပြင် အဝတ်စား၏အနေအထားအရ လိုအပ်ပါက ရေဖြန်းခလုတ်အား အသုံပြု၍လည်း မီးပူတိုက်နိုင်သည့် အရည်သွေးမြင့်လျှပ်စစ်မီးပူဖြစ်သည်။
💥afunction to use on dry, water vapor, spray.
💥 Adjust the temperature as needed.
💥 There THERMOSTATS thermostat.
💥 LED indicator.
💥 Power 1200W 220V 50Hz.
Pressure Cooker ( အသားပေါင်းအိုး )
*Pressure Cooker သည် အသားများ ကင်ခြင်းနှင့် စ သောလုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် Cooker ဖြစ် ပါသည်။
*Pressue နှင့် အသုံးပြုရ သောချက်ပြုတ်ခြင်းများတွင် အလွန် အသုံး၀င်ပါသည်။လုံခြုံ စိတ်ချ စွာဖြင့် ကြာရှည်ခံသော အသုံးပြုရလွယ်ကူသော
Pressure Cooker ဖြစ်ပါသည် ။အသားအားဓါတ်ပြယ် ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးပြီး မူလ အရသာကို ရရှိစေပါသည် အခြားသော Cooker များထက် လျှပ်စစ် နှင့် အချိန်ကို သက်သာစေ သော Cooker ဖြစ်ပါသည်။
Warranty One Year ပါရှိပါသည်။
Model no – (PC -225)
Watt – (900 W)
Double Gas stove (Infrared မီဖို)
* မီးအပူချိန် 1000 ဒီဂရီအပူခံနိင်ခြင်း
* Coil တဖက် မီးတောက်လေပွေ တဖက်ဖြစ်သဖြင့် ချက်ပြုတ်ခြင်းအားမီးအပူချိန် လိုသလို ထိန်းညှိပေးနိုင်ခြင်း
* Gas အကုန်အကျ သက်သာစေခြင်း
* Stainless Steel Coil များဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး မီးတောက်မီးခိုး
ထွက်ပေါ်ခြင်းမရှိဘဲ အပူချိန် အမြင့်ဆုံး အသုံးပြုနိုင်သည့် လုံခြုံ စိတ်ချရသော အရည်အသွေးမြင့် LPG Gas Stove Infrared မီးဖိုဖြစ်ပါသည်
Model no -(GS-893)
« မြန်မာ့မဏ္ဍိုင် မှတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးနေသော Custom Clearance လုပ်ငန်းစဉ်များ
မြန်မာ့မဏ္ဍိုင် ကုမ္ပဏီ မှ ထုတ်လုပ်လျက်ရှိသော Furniture & Home Decoration ပစ္စည်းများ »
မြန်မာ့မဏ္ဍိုင် ကုမ္ပဏီ မှ ထုတ်လုပ်လျက်ရှိသော Furniture & Home Decoration ပစ္စည်းများ
မြန်မာ့မဏ္ဍိုင် မှတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးနေသော Custom Clearance လုပ်ငန်းစဉ်များ
မြန်မာ့မဏ္ဍိုင် ကုမ္ပဏီ မှတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးနေသော License လုပ်ငန်းများ